Posted by ကို Tranquillus | မေလ 29, 2018 | လူ့ဆက်ဆံရေး
တဦးတည်းသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုရှေးခယျြမကထဲမှာဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ အလုပ်အဖွဲ့ ကျွန်တော်တစ်ဦးခက်ခဲလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ရေသန့်ကောလာဟလများ, သင်ကအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရှင်းလင်းစွာများမှာဘယ်မှာရန်လို, မကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်။
မကြာခဏကူညီပေး Talking ပဋိပက္ခများကိုရေပိုင်နက်ပြဿနာဖြေရှင်းရန် သင်သည်သင်၏စကားသည်ရှေးခယျြပေး။
ကြောင်းအဘို့, ကိုမဆိုလိုမုနျးတီးခြင်းမရှိဘဲ, ရင်းနှီးစွာဒီအပြုအမူများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စိတ်အားထက်သန်နှင့်ဤနေဖို့။
အခြေအနေကဆက်လက်ပါက prompt ကိုအကာအကွယ်အရေးယူဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျကိုယ်ပိုင်မေးလ်သို့မဟုတ်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် impugned သို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့အသုံးပြုတခြားအရေးအသား, သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သူတို့သည်များစွာသောအသုံးပြုမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့အထက်လူကြီးသင်သည်လည်းသင်၏မှတ်ချက်များအန္တရာယ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုဆုံးရှုံးမထိကြောင်း အကယ်. ရှာပါ။
သင့်ရဲ့အနညျးငယျလှည့်ကွက်ဖျော်ဖြေပြီးတာနဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်သမားအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများညွှန်ပြခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုချက်ချင်းသာလွန်အကြောင်းကြား: စသည်တို့ကိုမှတ်တမ်းများအတွက်နှောင့်နှေး, စီမံကိန်းများ၏တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်ဆင်းရဲသားကိုဆက်သွယ်ရေး,
အကယ်၍ လိုအပ်ပါကအခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်စည်းရုံးပါ။ သင်၏အမှုတော်သည်မကောင်းသောအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းမှုများရှိပါကတပ်များ၏စိတ်ဓာတ်ကိုမထိခိုက်စေရန်ဤ“ ဖိုင်” ကိုကိုင်တွယ်ရန်အရေးတကြီးကိစ္စကိုသင်၏အထက်အရာရှိက ပို၍ ပို၍ ယုံကြည်လာလိမ့်မည်။
မကောင်းတဲ့သဘောထားကိုသူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သြဂုတ်လ 19th, 2018Tranquillus